Ngamanye amaxesha unokujongana nomcimbi osemthethweni kwicandelo lomthetho wosapho. Owona mcimbi uqhelekileyo kwezomthetho kuqheliselo lomthetho wosapho luqhawulo-mtshato. Olunye ulwazi malunga neenkqubo zoqhawulo-mtshato kunye namagqwetha ethu oqhawulo-mtshato anokufumaneka kwiphepha lethu lomtshato. Ukongeza kuqhawulo mtshato, usenokucinga, umzekelo, ukwamkelwa komntwana wakho, ukwala ukuba ngumzali, ukufumana ilungelo lokugcina abantwana bakho okanye inkqubo yokumkelwa komntwana ongamzalanga abe ngowakho…
Into ebalulekileyo yokwazisa umntwana wakho, lukhetho lwegama. Ukuba ufuna ukukhetha ifani yomntwana wakho ngexesha lokuvuma, wena neqabane lakho kufuneka niye kumasipala kunye. Ukuba umntwana ungaphezulu kweminyaka eli-16 ubudala ngexesha lokwamkelwa, umntwana uya kukhetha ukuba yeyiphi ifani afuna ukuba nayo.
Ukuba uyamamkela umntwana, uba ngumzali osemthethweni ngokusemthethweni. Uya kuthi emva koko ube namalungelo kunye nezibophelelo ezimbalwa. Ukuze ube ngummeli womntwana ngokusemthethweni, kufuneka ufake isicelo segunya lokuba ngumzali. Ukwamkelwa komntwana kuthetha oku kulandelayo:
• Wena nomntwana niyindlalifa yomthetho yomnye nomnye.
• Kukhethwa ngaphandle kumatyala amabini okugqibela xa umama engakhange anyaniseke ngoyise womntwana.
• Ulawula imali yomntwana nezinto;
Isicelo sokubeka umntwana wakho ekhaya singangeniswa kwiJaji yaBantwana yiNkathalelo yoLutsha okanye yiBhodi yoKhathalelo loMntwana kunye neBhodi yoKhuseleko. Kukho iindlela ezahlukeneyo zokuhamba. Umzekelo, umntwana wakho angabekwa kusapho lokugcina abantwana okanye kwikhaya lokhathalelo. Kusenokwenzeka ukuba umntwana wakho abekwe nosapho.
Kwimeko enjalo, kubalulekile ukuba uqeshe igqwetha omthembayo. Ku- Law & More, iimfuno zakho kunye nezomntwana wakho ziphambili. Ukuba ufuna uncedo kule nkqubo, umzekelo ukunqanda umntwana wakho ukuba angabekwa kude nekhaya, uze endaweni elungileyo. Amagqwetha ethu anokukunceda wena nomntwana wakho ukuba isicelo sokufakwa kwenye indawo singenisiwe, okanye singeniswa, kwiJaji yaBantwana.